အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများကို ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်မဲ့ အကြံပြုချက်များ (Tips to Complement Your English Lesson) - Myanmar Network
Posted by Soe Soe Win on October 4, 2013 at 15:16 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
သင့်အနေနဲ့ ဘယ်ဘာသာစကားကိုပဲ သင်ယူသင်ယူ ဘာသာစကားသင်ခန်းစာများကို ပြည့်စုံအောင် ပြုလုပ်နိုင် တဲ့ ဖြည့်စွက်ချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ လူကြိုက်များပြီး သင်ယူရတာ ပိုလွယ်ကူတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုပဲ အာရုံစူးစိုက်ကြပါစို့။ စာသင်ခန်းရဲ့အပြင် ဘက်မှာ ဒီဘာသာစကားကို ဆက်လက်သင်ယူနိုင်ဖို့အတွက် အောက်ပါတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဂီတကို နားထောင်ပါ။ (Listen to music)
ကမ္ဘာမှာ လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ တေးဂီတကိုတော့ဖြင့် အင်္ဂလိပ်လို ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ဘယ်လို ဂီတအမျိုးအစားကိုပဲကြိုက်ကြိုက် သင့်စိတ်ကြိုက် အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ တီးဝိုင်းတစ်ခုခု၊ ဒါမှမဟုတ် ဂီတပညာရှင် တစ်ဦးဦးကိုတော့ တွေ့ရှိထားမှာ အသေအချာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် သင့်အနေနဲ့ ခေတ်ဟောင်းက rock and roll ကို ကြိုက်တယ်ဆိုရင် ACDC သီချင်းစာသားကို အာရုံစိုက်ကြည့်ပါလား? လက်ရှိခေတ်ပေါ် pop ဂီတ ဒါမှမဟုတ် R & B ဂီတ ကို နားထောင်ရတာ ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ Rihanna (သို့) Justin Bieber တို့ရဲ့ ဂီတကို နားဆင်ရင်း သူတို့ရဲ့ သီချင်းစာသား တွေကို ဖတ်ကြည့်ပါလား။ သီချင်းစာသားတွေကို ဖတ်ရုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ စကားလုံးတွေကို နားလည်အောင် လုပ်ကြည့်တာကလည်း ကောင်းမွန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပါ။ (Watch films)
ကောင်းတဲ့ အကြံတစ်ခုကတော့ အတန်းဖော်တွေစုပြီး အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကားကို ကြည့်တာ ပါပဲ။ ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာ sub-title ( အောက်က စာတန်းထိုးတာ) ဒါမှမဟုတ် dubbing (ရုပ်ရှင်ရဲ့မူရင်းဘာသာစကားကို အခြား ဘာသာစကားနဲ့ အစားထိုးခြင်း)တွေ မပါဘဲနဲ့ ကြည့်ကြည့်ဖူးပါသလား။ ဒီလိုသာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို ကြည့်သွားမယ်ဆိုရင် နောက်ပိတ်ဆုံး subtitle မပါပါလားဆိုတာကိုတောင် သတိမထားမိတဲ့အဆင့်ကို ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ဒီအသံတွေကို မိမိနဲ့တသားတည်းဖြစ်အောင် သင့်ဦးနှောက်က အလိုအလျောက် လက်ခံလာလို့ပါပဲ။ ဒီရလဒ်ရဖို့ကိုပဲ သင်ကလည်း ချိန်ရွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Chicago က အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသားတွေဟာဆိုရင် ဒီလိုလုပ်ဖို့ အတွက် သင်တန်းပြီးရင် အိမ်တစ်အိမ်မှာ စုကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ အပြောနားလည်နိုင်စွမ်း (listening comprehension)နဲ့ ဝေါဟာရတို့ကို အဓိက ထားပြီး လေ့လာကြပါတယ်။
Social Network ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုပါ။ (Use social networking wisely!)
အခုခေတ်ကြီးမှာ လူတွေဟာ အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင် နာရီပေါင်းများစွာ ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် smart phone, Iphone (သို့) BlackBerry အစရှိတဲ့ အသေးစားကိရိယာများကို အသုံးပြုပြီး နေကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သင်လုပ်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ လက်ရှိ computer မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ ဘာသာစကား (default language) ကို အင်္ဂလိပ်စကား (သို့) သင့်အနေဖြင့် သင်ယူလိုသော ဘာသာစကား သို့ပြောင်းကြည့်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းက သင့်အား အင်္ဂလိပ်စာကိုမဖြစ်မနေ သင်ယူရအောင်လို့ တွန်းအားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင့်အနေနဲ့ လုပ်ချင်တာတွေကို လုပ်နိုင်ဖို့ အတွက် လုပ်လိုက် မှားလိုက် (trial and mistake)တွေဖြစ်ပြီး အဲဒီကနေမှတဆင့် လွယ်ကူလာတဲ့အထိ အင်္ဂလိပ်စာကို သင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခု သင်လုပ်နိုင်တာကတော့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်သူ (သို့) သင့်လို အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့သူတွေနဲ့ မိတ်ဆွေဖွဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Facebook လူမှုရေးကွန်ယက်တွင် အင်္ဂလိပ်စာသင်သော Page စာမျက်နှာများကို like လုပ်ထားပြီး သင်၏ အင်္ဂလိပ်စာဘာသာ စွမ်းရည်တိုးတက်လာအောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Ivana Vitali ၏ Tips to Complement your English Lessons ကိုဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။
သငျ့အနနေဲ့ ဘယျဘာသာစကားကိုပဲ သငျယူသငျယူ ဘာသာစကားသငျခနျးစာမြားကို ပွညျ့စုံအောငျ ပွုလုပျနိုငျ တဲ့ ဖွညျ့စှကျခကျြတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ ဒီဆောငျးပါးမှာတော့ လူကွိုကျမြားပွီး သငျယူရတာ ပိုလှယျကူတဲ့ အင်ျဂလိပျဘာသာစကားကိုပဲ အာရုံစူးစိုကျကွပါစို့။ စာသငျခနျးရဲ့အပွငျ ဘကျမှာ ဒီဘာသာစကားကို ဆကျလကျသငျယူနိုငျဖို့အတှကျ အောကျပါတို့ကို ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
ဂီတကို နားထောငျပါ။ (Listen to music)
ကမ်ဘာမှာ လူကွိုကျအမြားဆုံးဖွဈတဲ့ တေးဂီတကိုတော့ဖွငျ့ အင်ျဂလိပျလို ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ ဘယျလို ဂီတအမြိုးအစားကိုပဲကွိုကျကွိုကျ သငျ့စိတျကွိုကျ အင်ျဂလိပျစကားပွောတဲ့ တီးဝိုငျးတဈခုခု၊ ဒါမှမဟုတျ ဂီတပညာရှငျ တဈဦးဦးကိုတော့ တှရှေိ့ထားမှာ အသအေခြာဖွဈပါတယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ သငျ့အနနေဲ့ ခတျေဟောငျးက rock and roll ကို ကွိုကျတယျဆိုရငျ ACDC သီခငျြးစာသားကို အာရုံစိုကျကွညျ့ပါလား? လကျရှိခတျေပျေါ pop ဂီတ ဒါမှမဟုတျ R & B ဂီတ ကို နားထောငျရတာ ကွိုကျတယျဆိုရငျတော့ Rihanna (သို့) Justin Bieber တို့ရဲ့ ဂီတကို နားဆငျရငျး သူတို့ရဲ့ သီခငျြးစာသား တှကေို ဖတျကွညျ့ပါလား။ သီခငျြးစာသားတှကေို ဖတျရုံသကျသကျမဟုတျဘဲနဲ့ စကားလုံးတှကေို နားလညျအောငျ လုပျကွညျ့တာကလညျး ကောငျးမှနျတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးတဈခုပဲဖွဈပါတယျ။
ရုပျရှငျတှကွေညျ့ပါ။ (Watch films)
ကောငျးတဲ့ အကွံတဈခုကတော့ အတနျးဖျောတှစေုပွီး အင်ျဂလိပျစကားပွောတဲ့ ရုပျရှငျတဈကားကားကို ကွညျ့တာ ပါပဲ။ ဒီလိုလုပျတဲ့အခါမှာ sub-title ( အောကျက စာတနျးထိုးတာ) ဒါမှမဟုတျ dubbing (ရုပျရှငျရဲ့မူရငျးဘာသာစကားကို အခွား ဘာသာစကားနဲ့ အစားထိုးခွငျး)တှေ မပါဘဲနဲ့ ကွညျ့ကွညျ့ဖူးပါသလား။ ဒီလိုသာ အင်ျဂလိပျစကားပွောတဲ့ ရုပျရှငျတှကေို ကွညျ့သှားမယျဆိုရငျ နောကျပိတျဆုံး subtitle မပါပါလားဆိုတာကိုတောငျ သတိမထားမိတဲ့အဆငျ့ကို ရောကျသှားနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုဖွဈရတဲ့ အကွောငျးရငျးကတော့ ဒီအသံတှကေို မိမိနဲ့တသားတညျးဖွဈအောငျ သငျ့ဦးနှောကျက အလိုအလြောကျ လကျခံလာလို့ပါပဲ။ ဒီရလဒျရဖို့ကိုပဲ သငျကလညျး ခြိနျရှယျရမှာဖွဈပါတယျ။ Chicago က အင်ျဂလိပျစာသငျတနျးသားတှဟောဆိုရငျ ဒီလိုလုပျဖို့ အတှကျ သငျတနျးပွီးရငျ အိမျတဈအိမျမှာ စုကွပါတယျ။ သူတို့ဟာ အပွောနားလညျနိုငျစှမျး (listening comprehension)နဲ့ ဝေါဟာရတို့ကို အဓိက ထားပွီး လလေ့ာကွပါတယျ။
Social Network ကို အကြိုးရှိရှိ အသုံးပွုပါ။ (Use social networking wisely!)
အခုခတျေကွီးမှာ လူတှဟော အဆကျအသှယျမပွတျအောငျ နာရီပေါငျးမြားစှာ ကှနျပြူတာ သို့မဟုတျ smart phone, Iphone (သို့) BlackBerry အစရှိတဲ့ အသေးစားကိရိယာမြားကို အသုံးပွုပွီး နကွေပါတယျ။ ဒီနရောမှာ သငျလုပျနိုငျတာတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။ လကျရှိ computer မှာ အသုံးပွုနတေဲ့ ဘာသာစကား (default language) ကို အင်ျဂလိပျစကား (သို့) သငျ့အနဖွေငျ့ သငျယူလိုသော ဘာသာစကား သို့ပွောငျးကွညျ့ပါ။ ဒီလိုလုပျခွငျးက သငျ့အား အင်ျဂလိပျစာကိုမဖွဈမနေ သငျယူရအောငျလို့ တှနျးအားပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သငျ့အနနေဲ့ လုပျခငျြတာတှကေို လုပျနိုငျဖို့ အတှကျ လုပျလိုကျ မှားလိုကျ (trial and mistake)တှဖွေဈပွီး အဲဒီကနမှေတဆငျ့ လှယျကူလာတဲ့အထိ အင်ျဂလိပျစာကို သငျယူနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ နောကျတဈခု သငျလုပျနိုငျတာကတော့ အင်ျဂလိပျစကားပွောတတျသူ (သို့) သငျ့လို အင်ျဂလိပျစာလလေ့ာနတေဲ့သူတှနေဲ့ မိတျဆှဖှေဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ နောကျပွီး Facebook လူမှုရေးကှနျယကျတှငျ အင်ျဂလိပျစာသငျသော Page စာမကျြနှာမြားကို like လုပျထားပွီး သငျ၏ အင်ျဂလိပျစာဘာသာ စှမျးရညျတိုးတကျလာအောငျ ပွုလုပျနိုငျပါသညျ။
Ivana Vitali ၏ Tips to Complement your English Lessonsကိုဘာသာပွနျဆိုထားခွငျး ဖွဈသညျ။
Permalink Reply by nguwar on October 7, 2013 at 15:26
Permalink Reply by htay kyi on October 12, 2013 at 3:10
Permalink Reply by yawaiaung on November 19, 2013 at 9:05